Xildhibaanno ka walaacsan dagaal beeleed muddo todobaad ah ka socda Hiiraan – Kalfadhi
Xildhibaanno ka walaacsan dagaal beeleed muddo todobaad ah ka socda Hiiraan
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka, oo u warramay Kalfadhi, ayaa muujiyey walaaca uu ku haayo dagaal beeleed ay dad badan ku dhinteen, barakacna sababay oo ka socda deegaanno ku yaala duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa u sheegay Kalfadhi iney si deg deg ah u dalbayaan in loo joojiyo colaaddaas. “Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada ku dagaalamaya degmada Maxaas, iney dagaalka si deg deg ah u joojiyaan. Waa inaan ku waana qaadanaa wixii dhib ahaa ee aan ka dhaxalnay dagaal sokeeye” ayuu yiri Xildhibaan Cabdixakiin.
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone) ayaa isaguna u sheegay Kalfadhi iney ugu baaqayaan dadka dhaqanka, odayaasha iyo waxgaradka deegaanka iney colaadda ku baxaan, oo ay doorkooda ka qaataan joojinta dhiiga sokeeye ee daadanaya.”Muddo badan ayaan dagaalanay, waana ogaanay waxa uu dagaal yahay ee odayaasha deegaanka waxaan ka dalbanayaa in dagaalka ay ku baxaan” ayuu yiri Xildhibaan Qoone.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa, isaga oo u diraya fariin dadka ku dagaalamaya Maxaas, waxa uu codsaday in nabadda la siiyo fursad. Maamulka deegaanka iyo madaxda dhaqanka ayuu ugu baaqay iney ku guuleystaan daminta colaaddaas.
Bartiisa Feysbuugga ayuu ku soo qoray “waxaan ka codsanaynaa madaxda Maamulka Hirshabeelle, Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan, Ugaasyada labada belood iyo Cuqaasha Dhaqanka in ay si deg deg ah uga howl galaan sidii colaadaas loo joojin lahaa”.
Xildhibaan C/xakiim Macalim Axmed iyo Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone) waxay labaduba u sheegeen Kalfadhi iney dhawaan ku biirayaan dhinacyada ku baxay xal u helidda colaadda degmada Maxaas, oo socoto muddo todobaad ah, iyada oo dagaalkii ugu dambeeyey oo socday afar maalin oo xiriir ah ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 21 qof.